FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SIBERIA HUSKY DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika siberia Husky Dog
Ace the Siberian Husky amin'ny 2 taona— 'Ace dia biby fiompy mahafinaritra izay nitondra fifaliana be ho an'ny fianakavianay! Novidina izy ho an'ny zanakay vavy, Brittany 2 taona lasa, Brittany dia 15 tamin'izany fotoana izany, nanao izay fara heriny izy mba ho bebe kokoa manjaka 'Neny'. Tsy afaka natanjaka saina izy hanao an'izany ka lasa nandray ny fahafantarana azy izahay sy ny dadany fifehezana ilaina . Ka mihevitra azy ho mpiray tampo aminy izy ary ny dadan'i Brittany no 'alpha' lahy, ary toy ny faha-2 amin'ny baiko aho. Tpt. Izy dia toy ny zaza efa lehibe! Mipetraka hatrany atsimo any Alabama izahay araka izay tratranao ary tsy maintsy nitondra fiara hatrany amin'ny 400 kilaometatra avaratry ny tampon'ny Alabama izahay mba hampiala azy amin'ny mpiompy malaza. Izahay dia mitazona dobo kiddie feno rano mandritra ny taona satria manana ririnina kely isika. Manana taratasy aminy izahay ary omentsika azy microchipped ary manao izay rehetra azonay atao izahay hahazoana antoka fa sambatra sy salama foana izy. Manana isika tsy niteraka azy mbola ary niady hevitra momba izany fanaovana azy neuter satria manjavona mandritra ny roa andro izy isaky ny mandeha etsy sy eroa hanelingelina ny vehivavy eo amin'ny manodidina. Ny fefy iray dia tsy hitazona azy hiditra satria nitsambikina mihoatra ny 6-7 metatra izy avy teo amin'ny toerana nipetrahany ary nampiasa rafitra fanaovana fefy tariby izahay fa alika mafy loha dia mahita toerana malemy kokoa fotsiny izy mampidina ny lohany ary mihazakazaka mamaky! Raha tsy izany dia mihantona izy ary mipetraka any ambanivohitra izahay ka betsaka ny efitrano fandefasana ary toa faly. Tianay izy ary tsy hatakalonay ho an'izao tontolo izao! '
Husky Siberia dia alika matanjaka, matevina ary miasa. Ny loha salantsalany dia ampitahaina amin'ny vatana, miaraka amina vava izay mitovy halava amin'ny karan-doha, miaraka amina fijanonana voafaritra tsara. Ny lokon'ny orona dia miankina amin'ny lokon'ny palitaon'alika. Mainty izy amin'ny alika fotsy, mainty na mainty, aty amin'ny alika varahina ary miloko mena amin'ny alika fotsy. Ny maso salantsalany, miendrika boribory boribory somary lavalava ary tonga amin'ny manga, volontany, amber na izay mitambatra ao aminy. Ny maso dia mety ho manga antsasaky ny volontsôkôlà (parti-eyed), na ny alika mety hanana iray maso manga ary maso volontany iray (maso-bi). Ny sofina miorina dia telozoro ny endrika, ary avo miakatra eo an-doha. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Ny rambony dia entina any an-damosin'olon-droa, tsy miolaka amin'ny lafiny roa rehefa faly ny alika. Ireo tongotra 'kiraro oram-panala' lehibe dia misy volo eo anelanelan'ny rantsan-tongotra mba hanafanana azy ireo mafana sy hahazoana mitazona gilasy. Esorina ny lalàma indraindray. Ny palitao lava sy matevina dia matevina ary mahazaka maripana hatramin'ny -58 ° ka -76 ° F (-50 ° ka -60 ° C). Ny palitao koa dia tonga amin'ny karazany lava volo antsoina hoe akanjo volom-borona. Ny halavan'ny volon'ondry (indraindray volafotsy volon'ondry na volon'ondry) dia avy amin'ny fototarazo iray resessive ary tsy ao amin'ny ankamaroan'ny fenitry ny klioba kennel. Ny loko palitao dia ahitana ny rehetra, manomboka amin'ny mainty ka hatramin'ny fotsy madio, misy na tsy misy marika eo amin'ny loha. Ny saron-tarehy sy ny olona matetika dia fotsy, ary ny palitao sisa misy loko. Ny ohatra amin'ny loko iraisana dia ny mainty sy fotsy, mena sy fotsy, volontany, volondavenona sy fotsy, volafotsy, volondavenona, sable sy fotsy, volomboasary mena misy tendrony mainty, volondavenona sy fotsy fotsy. Piebald dia maodely mahazatra mahazatra.
Ny Husky Siberia dia alika be fitiavana, malemy paika, milalao, sambatra mankafy ny ankohonany. Malina, mora tohina, ara-tsosialy, miala sasatra ary tsy dia mahazatra, alika matanjaka be io, indrindra rehefa tanora. Tsara amin'ny ankizy ary sariaka amin'ny olon-tsy fantatra, tsy mpiambina mpiambina izy ireo, satria kely ny fahitany azy ary tia ny olon-drehetra izy. Ny Huskies dia tena manan-tsaina sy mahay mampiofana, saingy ny didiny ihany no hajain'izy ireo raha hitany fa mahery kokoa noho izy ny olombelona. Raha tsy mampiseho fahaiza-mitarika ilay mpitantana dia tsy ho hitany ny dikany amin'ny fankatoavana. Training mila faharetana, tsy fitoviana ary fahatakarana ny toetran'ny alika Arctic. Raha tsy mafy orina 100% ity alika ity ianao, matoky tena, tsy miovaova mpitarika fonosana , hanararaotra izy, lasa fanahy iniana sy ratsy toetra . Huskies manao tsara jogging namana , raha mbola tsy mafana loatra. Huskies mety sarotra vaky trano . Tia midradradradra ity karazana ity ary mankaleo mora foana. Tsy mandeha tsara raha avela irery mandritra ny fotoana maharitra tsy misy fanatanjahan-tena mialoha. Husky manirery, na Husky tsy ampy fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana afaka manimba be . Tsarovy fa ny Husky dia a alika sled ao am-po sy fanahy. Tsara ho an'ny biby fiompy hafa izy io raha notezaina niaraka tamin'ny alika kely. Ny Huskies dia mpihinan-kanina ary tsy mila sakafo firy noho izay antenainao. Tia mandehandeha ity karazany ity. Huskies Siberia dia afaka manao namana mahafinaritra ho an'ireo olona mahalala ny zavatra antenaina amin'ireto biby tsara tarehy sy manan-tsaina ireto ary vonona ny hametraka fotoana sy hery ao aminy.
Haavony: Lehilahy 21 - 23½ santimetatra (53 - 60 cm) Vehivavy 20 - 22 santimetatra (51 - 56 cm)
alika omby aostraliana afangaro amin'ny collie border
Mora voan'ny tsimok'aretin'ny valahana, ectopie (famindrana ny urethra), olana eo amin'ny maso toy ny katarakta zaza, PRA (voalohany indrindra amin'ny alika lahy), dystrophy kornea ary tsy fitovizan'ny kornea kornaly. Ireo mpiompy dia afaka mahazo fizahana valahana amin'ny OFA sy ny fijerena maso isan-taona avy amin'ny mpitsabo aretin-tsaina (AVCO) ary misoratra anarana amin'ny CERF sy SHOR). Mora amin'ny olana amin'ny hoditra fantatra amin'ny hoe zinc mahazaka dermatitis, izay mihatsara amin'ny fanomezana solika zinc.
Matetika izy ireo dia tsy atolotra ho an'ny trano, na izany aza dia afaka mipetraka ao amin'ny trano izy ireo raha tsara fiofanana sy ampiasaina tsara. Ny Husky Siberia dia mihetsika be ao an-trano ary manao izay tsara indrindra amin'ny tokontany malalaka misy fefy. Noho ny palitaony mavesatra dia aleon'ireto alika ireto ny toetrandro mahafinaritra. Ny olona iray dia tokony hampiasa fahiratan-tsaina momba ny fitazonana azy ireo amin'ny hafanana amin'ny alàlan'ny fanomezana alokaloka sy fifehezana rivotra ampy. Ity karazana ity dia aleony miaina anaty fonosana.
Ny Huskies Siberia dia mila fanatanjahan-tena mety, anisan'izany ny isan'andro MANDEHANA na jogging, fa tsy tokony hanaovana fanatanjahan-tena tafahoatra amin'ny toetr'andro mafana. Mila tokotany lehibe misy fefy avo izy ireo, saingy aleveno eo am-pototry ny fefy ilay tariby satria mety hitrandraka ny lalan-kalehany izy ireo ary handeha hihaza.
Ny Huskies Siberia dia nampiasain'ny Foko Chukchi nandritra ny taonjato maro, avy teo amin'ny saikinosy Siberia atsinanana mba hisintona sled, reindeer andd, ary toy ny watchdog. Alika miasa lavorary izy ireo amin'ny toe-javatra sarotra amin'ny Siberia: mafy, afaka miditra ao anaty fonosana kely, ary faly miasa mandritra ny ora maro. Ny amboa dia manana tanjaka sy maivana. Teratany Siberia, ny Husky dia nentin'ny mpivarotra volom-borona tao Malamute ho an'ny hazakazaka arctic noho ny hafainganam-pandehan'izy ireo. Tamin'ny taona 1908, ny Huskies Siberia dia nampiasaina tamin'ny fifaninanana All-Alaskan Sweepstakes voalohany, hetsika iray izay nitondran'ny mpikarakara ny alikany tamina hazakazaka alika lava 408 kilaometatra. Nanjary nalaza ireo alika tamin'ny 1925 rehefa nisy valan'aretina diphtheria tany Nome, Alaska. Ny Huskies Siberia dia nampiasaina hitondrana ireo fanafody tena ilain'ny olona. Tany am-piandohan'ny taona 1900 tany ho any dia nampiasa ny alika ny Admiral Byrd nandritra ny Expeditions Antarctic. Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, ny alika dia niasa tao amin'ny Sampana Fikarohana sy Fanavotana an'ny Artika ao amin'ny Tafika. Ny talenta an'ny Siberian Husky dia milomano, manao sarety ary mihazakazaka. Ny Siberian Husky dia neken'ny AKC tamin'ny 1930.
Echo the Siberian Husky toy ny alika kely amin'ny 8 herinandro— 'Vao nahazo ny Echo isika 3 andro lasa izay ary mahagaga izy! Ka hendry dia efa nianatra nipaoka ahy izy rehefa mila mivoaka ary mianatra mipetraka aorian'ny izy manao ny asany amin'izay izy afaka mahazo ny fitsaboana azy. Tsy mila miteny azy intsony aho! Feno heriny izy ary tiany ho ao amin'izay efitrano misy ahy. Tiako tanteraka izy '
Balto ilay alika kely Siberia Husky amin'ny 11 herinandro
Ity i Teddy ilay Siberia Husky mena mena sy fotsy miaraka amin'i maso manga amin'ny 5 1/2 taona. Ny palitao volon'ondry lava volo (indraindray volon'ondry na wooley) dia avy amin'ny fototarazo iray resessive ary tsy ao anatin'ny fenitra voasoratra amin'ny ankamaroan'ny club kennel.
Ity sary ity dia mampiseho ny fomba ahavitan'ny akanjon'i Husky ao anaty vongan-kazo mandritra ny vanim-potoana fandosirana. Ny fanosehana ny alika dia manampy amin'ny fanalana ny volo alohan'ny hamenoany ny trano rehetra.
Ace ilay Siberia Husky manana maso manga toy ny alika kely
ny fako alika kely Siberia Husky sired avy amin'i Husky (aseho etsy ambony)
Genevieve ilay mena sy fotsy Siberian Husky dia mankafy milanja sled mitarika sy mitaona ny tompony amin'ny ski.
Normey, Siberia Husky fotsy madio amin'ny faha-5 taonany
Diablo ilay Siberian Husky fotsy sy manga
Kiya ilay malaso Siberia Husky amin'ny 2 taona
Dane lehibe sy ny fitsipika poodle Mix
Hijery ohatra misimisy momba ny Husky Siberian
Siberian Husky sary 1
Siberian Husky sary 2
Siberian Husky Sary 3
Sary Siberia Husky 4
Sary Siberia Husky 5
Siberian Husky Sary 6
Siberian Husky Sary 7
anglisy bulldog great dane mix
alika omby aostraliana afangaro dalmatian
tan rat terrier chihuahua mifangaro
inona ny alika fanjakana any Texas